‘पार्टीले अघि सारे मेयर लड्न तयार छु’–पहारी - Nagarik Sandesh
Home / कुराकानी / ‘पार्टीले अघि सारे मेयर लड्न तयार छु’–पहारी
पोखरा । नेपाल सरकारले आगामी बैशाख ३१ मा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसंगै देश यतिबेला निर्वाचनमय बनेको छ । भौगोलिक हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखरा–लेखनाथ नगरपालिकामा पनि चुनावि रन्को छाएको छ । खासगरि प्रमुख ठूला दलहरुबाट मेयर उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मका सयौं आकांक्षिहरुले आ–आफ्ना आकांक्षा सञ्चार माध्यममार्फत प्रकट गर्न थालेका छन् । कसैले पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्नों इच्छा व्यक्त गरेका छन् । कसैले सामाजिक सञ्जालबाट पनि आफुलाई उम्मेदवारका रुपमा अगाडी सारेका छन् । यतिबेला हामी नेकपा एमालेका नेता राजिव पहारीसंगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं । पहारीले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकामा मेयर पदका आकांक्षा प्रकट गरेका छन् । पहारी एमालेको राजनीतिमा होलटाइमर भएर लागेको २७ वर्ष भइसकेको छ । कलिलै उमेरमा पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट स्ववियु सभापति हुँदा उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशभरकै नमुना सभापतिको रुपमा सम्मान समेत गरेको थियो । पहारी हाल एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालका अध्यक्ष हुन् । प्रस्तुत छ उनीसंगको कुराकानीको सार संक्षेप (सम्पादक)
आसन्न निर्वाचनमा तपाईले पनि पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयर पदका लागि आकांक्षा व्यक्त गर्नुभएको कुरा आएको छ नि ?
स्थानिय तहको निर्वाचन १९ वर्षपछि हुँदै छ । २०५४ सालमा निर्वाचन हुँदा १० वर्षको व्यक्ति अहिले ३० वर्षको पुगिसकेको छ । त्यसो भएर यो निर्वाचनमा सम्पूर्ण सिंगो मुलुकलेनै यो निर्वाचनलाई उत्सुकताका साथ हेर्नु, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको निम्ति, निर्वाचनमा मत हाल्नका लागि सम्पूर्ण जनताले,पार्टीका कार्यकर्ताले चासो राख्नु स्वभाविक हो । किनकी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्ड भनेकै स्थानिय तह हो । त्यसमा पनि अहिलेको स्थानिय तह भनेको कार्यपालिका पनि न्यायपालिका पनि व्यवस्थापिका पनि हो । एक प्रकारले नगरपालिकाको मेयर अथवा उपमेयर हुनु भनेको प्रधानमन्त्रि मन्त्रि भए जस्तै हो । त्यसैले पनि अहिले चुनावमा उठन धेरैले आकांक्षा प्रकट गर्नु पनि स्वभाविकै हो । र मेरो पनि आकांक्षा हो । पार्टीले अगाडी सारेमा म पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयर पदमा चुनाव लड्न तयार छु ।
तर तपाईको मेयर पदमा लड्ने बेला भएको छैन भनेर पनि भन्छन ?
अब बेला के लाई भन्ने ? उमेरले भन्नुहुन्छ भने ४०-४१ पुगें । राजनीतिमा लागेको कुरा गर्नुहुन्छ भने होलटाइमर भएर लागेकोनै २७ वर्ष भयो । अवसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने ०१७ सालमा पृना क्याम्स स्थापन भयो । हालसम्मकै स्ववियु सभापतिका रुपमा मैले त्यो प्रर्पmमेन्स पनि गरिसकेको छु । नेपालको युवा आन्दोलनलाई उचाईमा पु¥याउन त्यो खाले भूमिंका पनि निर्वाह गरेको छु । यहाँपनि क्षेत्रिय कमिटि क्षेत्र नम्बर ३ को अध्यक्ष भएर पनि काम गरें । पार्टीको पनि सचिवालय सदस्य भएर काम गरें । त्यहि भएर बेला के लाई भन्ने ? हिंजो २१ हजार युवाहरुलाई साथमा लिएर विकास निर्माणको काममा पनि लागेकै हुुँ । मदन भण्डारीले जनताको बहुदलिय जनवाद प्रतिपादन गर्दा उहाँको उमेर ३६ वर्षको थियो । कार्लमाक्सले विश्व कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणा पत्र लेख्दा उहाँको उमेर ३० वर्षको थियो । नेपोलियन बोनापार्टले विश्व विजय गर्न हिंडदा उनको उमेर १९ वर्षको थियो । अहिलेका नेताहरु जो सांसद वा मन्त्रि हुनुहुन्छ उहाँहरु ३८÷४० वर्षकै उमेरमा त हुनुभएको हो । बेला भएको हो कि होइन भन्ने कुराको मापन गर्ने के त ।
ल ठिकै छ । उसो भए बेला भएकै होला । तर मेयर पदका लागि तपाईको पार्टीभित्रैबाट पनि आकांक्षि त धेरैनै छन् । यि मध्ये तपाईले नै पाउने आधार के छ त ?
हामी पार्टीका इमान्दार सिपाही हौं । पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामी पालना गर्छौ नै । नेकपा एमाले भनेको जनताको पार्टी हो । प्राकृतीक न्याय संगत तवरले यसले निर्णय गर्छ । व्यक्तिले यहाँको मेयरका लागि इच्छा चाहना राख्नु स्वभाविकै हो । तर अहिलेको आवश्यकता को हो, को जनताको विचमा लोकप्रिय छ, यो समग्र पोलेमहानगरको विकास गर्न सक्छ, कसले समृद्ध पार्न सक्छ, यो नै अहिलेको आवश्यकता हो । र पार्टीले पनि यसमा विचार गरेरनै निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
क्यापेबल त सबैले म छु नै भन्छन नि !
हैन, व्यक्तिले के भन्छ, के गर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि आवश्यकता कसको हो बुझ्नु पर्दछ । को राम्रो भन्ने कुराको सर्वेक्षण पनि हुन सक्दछ । अहिलेको पुस्ताले के खोजिरहेका छन्, अहिलेको समस्याको समाधान कसले गर्न सक्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण विषय हो ।
यहाँ तपाई भन्दा अग्रजहरु धेरै नै छन् । अग्रजहरु छँदाछँदै तपाईले उम्मेदवारी पाउनुहोला र ?
अधिकार प्राप्तीको लडाई सकियो, अब समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि युवा नेतृत्व चाहिन्छ भनेर आवाज उठिरहेको बेला नेपालकै युवा आन्दोलनको सर्वाधिक लोकप्रिय संगठन युवा संघको नेतृत्व लिइरहेको व्यक्तिले चुनाव लड्नु पर्छ भन्ने आवाज आइरहेको छ । पार्टी भित्रैबाट र आम जनतामाझ पनि यस्तो छलफल भइरहेको छ । म आँफैले मैलेनै उम्मेदवारी पाउनुपर्छ भनेर पनि भन्दिन । अहिले समाजले परिवर्तन खोजेको छ । युवा नेतृत्व चाहिरहेका छन् । अग्रज राजनैतीक नेताहरुले परिवर्तनको आन्दोलन गरे । अबको समृद्धतर्फ अगाडी बढ्न युवाको आवश्यकता महशुस भइरहेको छ । लामो समय पार्टीका लागि काम गरेको र युवा संघको नेतृत्व गरिरहेको बहालवाला व्यक्ति चुनाव लड्नुपर्छ भनेर जतस्तरबाट आएको यो आवाजलाई मैले अस्वभाविक रुपमा लिएको छैन ।
तपाईको पार्टीले त जित्नेलाई उम्मेदवार बनाउने भनेको छ । तपाई चुनाव जित्ने उम्मेदवार हो ?
जित्नेलाई मात्रै होइन, नेकपा एमालेले उम्मेदवारका लागि सातवटा मापदण्ड कायम गरेको छ । र म यि सातैवटा मापदण्डको परिक्षामा उत्रिन तयार छु ।
फेरी पार्टी भित्रपनि गुट–उपगुट त छँदैछ । ओली, नेपाल । यस्तोमा तपाईले उम्मेदवारी पाउनुहोला त ?
उम्मेदवार भनेको व्यक्तिको इच्छा चाहानाले भन्दा पनि पार्टीको आवश्यकताले बनाउने हो । कसले अहिले समग्र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका समस्याहरुलाई चुनौतीहरुलाई सामना गरेर अगाडी बढ्न सक्छ, यहाँको विकास निर्माणका सम्भावनाहरु के के हुन, कसले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ, ति समग्र कुराहरुलाई पार्टीले ध्यान दिने छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु ।
तपाईको त पर्चा पनि आइसकेछ नि । ‘सबैका लागि युवा छहारी,पोखरामा राजीव पहारी’ लेखेको पर्चा फेसबुमा देखियो । प्रचार–प्रसारमै जुट्नु भएको देखियो नि ?
त्यो मैले हालेको होइन । खै कसले राख्यो मलाई थाह पनि छैन । स्फुर्त रुपमा कसैले राख्छ भने मैले बुझेको छैन । पार्टीले उम्मेदवार घोषणा नगरेसम्म म प्रचार–प्रसारमा लाग्ने कुरा पनि हुँदैन ।
उसो भए पार्टी भित्र वा जिल्लामा के भइरहेको छ त आन्तरिक तयारी ?
खै । म त पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता हुँ । पार्टीकै काममा लागिरहेको छु । २७ वर्षदेखि जसरि लागिरहेको छु, त्यसरिनै लागेको छु ।
Previous सगरमाथाको आधारशिविरमा सङ्कलन हुने मलमूत्रबाट ग्यास
Next प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधि स्टिल ब्याक लुम्बिनीलाई